Author: Mizragore Yojora
Maxamuud Faarax Cismaan, tel: Xubnaha Guddida Culimada waxa ka reebban.
Dambiyada laga gab daztuurka qofka sida xasuuqa, di maxkamad la’aan ah, jidh dilka iyo wixii la mid ah malaha muddo dhaaf.
December 24 at 2: Madaxweynuhu waa madaxa Qaranka iyo Dawladda; waana astaanta midnimada muwaadiniinta ka tirsan Jamhuuriyadda Somaliland.
Haddii uu Golaha Guurtidu oggolaan waayo ama ku soo jawaabi waayo bil cudub, mashruuc-sharcigu wuu ansaxaya, sidaas ayaana Madaxweynaha loogu gudbinayaa. In uu fasiro micnaha xeerarka ka soo baxa Golayaasha dastuuriga ah iyo xeerarka degdegga ah iyada oo la raacayo Dastuurka.
Soomaaliya waa Jamhuuriyad Federaali ah oo gob ah, kuna dhisan matilaad dadweyne loo dhan yahay oo dimoqraaddi ah. Haddii doorashada Golaha Wakiiladu ku qabsoomi weydo duruufo adag awgeed, Golaha hore ayaa xilka sii haynaya inta ay ka dhamaanayso duruuftaasi, lagana dooranayo Gole cusub. Ka qayb-gelidda shirarka caalamiga ah, isagoo ka wakiil ah Jamhuuriyadda Somaliland. Kal-fadhiga aan caadiga ahayn ee Golaha Wakiulada waxa uu ku qabsoomi karaa: Waax waliba awoodda Dastuurku u gaar yeelay way u madax bannaan tahay.
Qofku wuxuu xaq u leeyahay in la nabad galiyo jidhkiisa; ciqaabta jidhka iyo wax yeelo kasta oo loo geysto way reebban tahay.
Sida ku xusan Cutubka tobnaad ee Dastuurka, maxkamad ayaa burin cusu sharci kasta ama tallaabo maamul oo ka soo horjeedda Dastuurka. Madaxweynaha ayaa guddoomin doona fadhiyada Golaha Wasiirada ee caadiga ah iyo kuwa aan caadiga ahayn. Tirada Guddida iyo Muddada Xilka. Fulinta xeerarka aan Waaxda Garsoorka awoodaheeda hoos iman; Gaashaanka dushiisa waxaa ku yaal rurkumo carbeed oo xardhan, lehna shan dsatuurka oo dahabi ah oo labada geesba ku yaalliin ay kala qaaran yihiin.
Fadlan ka qayb qaado hergelinta mashruuca isku wax u qabso ee lagu dhisayo cusbitaalka degaaanka xidda. Xukun dembi ah oo xilka lagaga xayuubiyey.
Dawladda federaalka waa inay hormuud ka noqotaa horumarinta nidaamka maamulka hoos loogu dejinayo oo ay meesha ka saarto shakiga ah in aaney doonayn federaalka. Xeerka ayaa xadaynaya muddada ugu badan ee qof loo hayn karo baadhitaan. Shaqaalaha kale ee ka shaqeeya Garsoorka waxay hoos imanayaan xeerarka shaqaalaha Dawladda.
Dhulka Qaranku waa muqaddas; waana laguma xad gudbaan. Said Dani gobolka Mudug uma ahayn Puntland shalay, ha ogaadaan marka Xildhibaanada sharaxta leh ee gobolkaas in uusan istaahilin inay codkooda siiyaan.
Ku-simidda xilka Madaxweynaha marka uu Madaxweynuhu maqan yahay ama uu buko.
Xabsigu waa edbin iyo toosin. Maamulka dugsiga ayaa u asteeyey in 12 iyo 13 bisha Afraad qabshada bandhigaas, wuxuuna u furan yahay inay ka soo qayb galaan dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee danaysa Hiddaha iyo dhaqanka. Dawladdu waxay horumarinaysaa hiddaha iyo dhaqanka suubban ee bulshada iyada oo isla markaa laga faa’iidaysanayo aqoonta bulshada adduunka. Midabka sare waa Doog, dhexdiisana ay ku qoran tahay Laa-llaaha llla-Lahu Muxamedu Rasuul-Allaah oo Far-Carabi ah, oo midab cad ah; midabka dhexe waa caddaan ay badhtanka kaga taallo xiddig madow oo shan geesley ah, madaxyo simanna leh; midabka hoose waa casaan saafi ah.
Guddoomiyaha Golaha Wakiilada ayaa leh hab-maamuuska 3aad ee Qaranka. Xubinta Golaha Wakiilada loo qaban maayo, waxna loogu qaadi maayo arrin uu ogaaday ama uu Golaha soo hor-dhigay ama arrimo uu ra’yi ka dhiibay. Haddii ansixinta miisaaniyadda cusubi dhammaan weydo ka hor bilowga sannad- maaliyadeedka cusub, waxa lagu dhaqmayaa miisaaniyaddii hore inta ay ka soo baxayso miisaaniyadda cusubi.
Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka. Madax weyne asad shacabkiisa waka Shaqeystey oo amniga ey gur yahooda Kuhurtam ninka usameyey weyan Shacabka puntland balanteenu wa asad. CadaaladHorumar iyo Ictiraaf. Inuu leeyahay aqoon heer jaamacadeed ah amaba wax u dhigma oo dhinaca Diinta ah. Qaabilaadda diblomaasiyiinta shisheeyaha dastuuurka ka qabashada waraaqaha aqoonsigooda Credentials.